hirka istaraatijiyada hormarinta xoolaha oo Muqdisho ka furmay+SAWIRO – Kismaayo24 News Agency
Ra’isul Wasaaraha Xukuumadda Federal-ka Soomaaliya ayaa magalaada Muqdisho ka furtay shir weyne looga hadlayo istaraatijiyada hormarinta xoolaha Soomaaliya.
Shirkaan oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Xanaanada Xoolaha waxaa daah furay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre waxaana ka qeyb galay Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Dowladda Federal-ka, Madaxda Wasaaradaha Xanaanada Xoolaha Dowlad Goboleedyada, Hay’adda cunada iyo beeraha Qaramada midoobe u qaabilsa ee FAO iyo Bankiga Aduunka xubno ka socday.
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo shirka furay ayaa sheegay in qorshahan uu muhiim u yahay nidaamka dhaqan dhaqaale ee Soomaaliya, isagoona xusay in marka laga yimaado dhoofka xoolaha ay sidoo kale fursad u tahay dadka Soomaaliyeed ee gudaha dalka ku sugan.
Wasiirka Xanaanada Xoolaha Xuseen Maxamed Xuseen ayaa dhinaciisa xusayin shirkaan oo seddex cisho ka socon doona Muqdisho in Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa ay ka go’an in ay u howl gasho sidii loo horumarin lahaa malaayiinta xoolo dhaqatada ah, ganacsatada xoolaha iyo dhammaan dadka noloshoodu ku xiran tahay wax soo saarka xoolaha. Si ay arrintaani u dhaqan gasho waxa hay’adaha dowliga ah looga baahan yahay in ay diyaariyaan siyaasadda , istiraatiijiyadda iyo shuruucda kale ee lagu hirgalinayo horumarinta xoolaha iyo nolosha xoolo dhaqatada Soomaaliyeed.
Gebagebada shirka ayaa la fikayaa in war murtiyeen qeexaya qodobadii la isla gartay laga soo saaro.
Qudbadii Wasiir Xuseen “Ugu horreyn waxa aan jeclaan lahaa inaan dhammaantiin idinku soo dhaweeyo munaasabadaan muhiimka ah oo lagu ansixinnayo istiraatiijiyada horumarinta xoolaha Soomaaliya. Waxa aan ku faraxsanahay inaan arko sida dhammaan looga soo qeyb galay munaasabadaan, haddii ay ahaan lahayd Wasaaradaha Federaalka , Wasiirada Xannaanada Xoolaha ee dowlad goboleedyada , ganacsatada , hayadda FAO, bangiga adduunka iyo deeq bixiyayaasha. Waxa aan jeclaan lahaa inaan fursaddaan uga faa’iideysto inaan u mahad celiyo hayadda FAO iyo Bangiga adduunka caawinaada ay u fidiyeen hirgalinta istaraatiijiyadan lagu horumarinayo xoolaha Soomaaliyeed.
Sida badankiin aad xusuusataan , hawshan aan maanta u fadhino waxaansi wadajir ah u soo billawnay sanadkii hore, dhammaantiina aad ka soo wada qeyb qaadateen la tashiyadii ballaarnaa ee lala soo sameeyey Wasaardda X. Xoolaha ee Federaalka iyo Wasaardaha Maamul Goboleedyada, wada tashiyadaasoo oo ka kala goobo kala duwan oo dalka gudihiisa ah arrintaasoo ay inoo fududeeyeen hayadaha Bangiga Aduunka (WB) IYO Hay’adda Cuntada iyo Beeraha (FAO).
Ujeedooyinka wada tashiyadaasi waxeey haayeen in fikraddaha kala duwan ee Stkeholder-ska sektarka xoolaha sida: Dhibaatooyinka jira, baahida jirta, fursadaha jira iyo wixii talooyin ah ee lagu hormarin karo Sektarka Xoolaha.
Sidaa darted Straateejiyadaani waxaa ku xussan dhibaatooyinka waaweeyn ee jira iyo fursadaha jira iyo sidoo kale aragtida fog ee lagu hormarinayo straateejiyadaan markii la gaaro 2030.
Wasaaradda X. Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa waxaa ka go’an in ay u howl gasho sidii loo horumarin lahaa malaayiinta xoolo dhaqatada ah, ganacsatada xoolaha iyo dhammaan dadka noloshoodu ku xiran tahay was soo saarka xoolaha. Si ay arrintaani u dhaqan gasho waxa hay’adaha dowliga ah looga baahan yahay in ay diyaariyaan siyaasadda , istiraatiijiyadda iyo shuruucda kale ee lagu hirgalinayo horumarinta xoolaha iyo nolosha xoolo dhaqatada Soomaaliyeed.
Wasaaradda Xannaanada Xoolaha iyadoo si hufan u fulinaysa waajibaadkeeda shaqo waxa ay gaartay in ay u hirgalaan qodobada soo socda;
1. Wasaaradda Xannaanada Xoolaha , Dhirta iyo Daaqa waxa heer gabagabo ah u maraya diyaarinta dakumeentiga waddanka ee lagu qeexayo ka hortagga abaaraha iyo dhibaatooyinka ka dhasha , taas oo qeyb ka noqon doonta dakumeentiga guud ee gobolka geeska Afrika.
2. Waxa lagu beeray 30.000 oo geed dhammaan deegaanada dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir, iyadoo la hiigsanayo in la beero dhir gaareysa 1 milyan oo geed dhammaadka sanadka 2020.
3. Waxa laga hirgaliyey 6 xaruumood oo lagu kobciyo dhirta dhammaan magaalo madaxyada dowlad goboleedyada dalka , taas oo wasaaraddu ku hiigsanayso barnaamijka dib u dhiraynta dalka .
4. Waxaacudurro kala duwan laga tallaalay tiro gaaraysa 28.000.000 oo nee foo xoolo ah.
5. Wasaaraddu waxa ay qabatay shir weynihii caalamiga ahaa ee looga hortagayey dhuxusha sharci darrada ee waddanka laga dhoofiyo iyo sidii wacyi galin loogu samayn lahaa bulshada.
6. Wasaaraddu waxa ay gacanta ku haysaa diyaarinta sharciga lagu hormarinayo caanaha iyo hilibka , iyada oo arrintaas loo marayo wada tashiyo ballaaran oo lala yeelanayo dowlad goboleedyada dalka iyo xirfadlayaasha wax soo saarka xoolaha.
7. Dib u dhiska shaybaarka dhexe ee wasaaradda oo dhawaan la dhammays tiri doono.
Xoolaha waxa ku tiirsan nolosha xoolo dhaqatada , waxaana daqli ka hela dowladda, isla markaana waxaa ka shaqaysta boqolkiiba 55% dadka Soomaaliyeed, sidaa darted waxa muhiim ah in la xoojiyo ka hortagga abaaraha iyo cudurrada wax yeeleeya xoolaha iyo horumarintooda.
Gabagabadii, waxa aan idiin rajeynayaa inaad yeelataan doodo wax ku ool ah , isna dhaafsataan fikradaha lagu hormarinayo istaraatiijyada xoolaha ee aan maanta halkan u fadhino, taas oo qeyb ka noqon doonta qorshayaasha lagu hormarinayo wasaaradda.
Aabihii dhalay Ra’iisul Wasaaraha dalka Ethiopia Axmad Abiy oo geeriyooday.
Maamulka Koonfur Galbeed Oo Guddi U Xilsaaray Xasuuqdii Ka Dhacay Galmudug.
TOP NEWS: Musharixiin Dhowr ah oo Isaga Baxay Xarunta Golaha Shacabka oo Maanta ay ka socotay Dood-wadaag
WAR DEG DEG: Madaxweyne Xasan Sheekh oo Dhuusamareeb ka dagay
Orodyahanka Faransiiska oo isku xaaray Asago ku jira Tartanka Tartanka Orodka 50,000m
admin 20th August 2016